4 Nzọụkwụ na Access iPhone ndabere Data na Dr.Fone
> Resource> iPhone> Ịnweta iPhone ndabere: 4 Nzọụkwụ na Access iPhone ndabere Data na Dr.Fone
Olee otú m nwere Kpọmkwem Nweta iTunes ndabere Files?
M nwere iPhone 3GS na ụnyaahụ m furu efu ya. M nwere ọtụtụ kọntaktị, foto na ozi na ekwentị. M maara iTunes ndabere na m Mac-agụnye ndị niile data, m ebe a na-arịọ ma na e nwere ụzọ ọ bụla iji nweta iPhone ndabere na m Mac ma ọ bụ. Daalụ nke ukwuu.
N'ihi Apple iwu, ị na-agaghị ekwe ka ịnweta iTunes ndabere na na gị Mac ọbụna ma ọ bụrụ na ị maara ebe ọ bụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ịnweta iPhone nkwado ndabere na mpaghara na-agụ ya na gị na Mac, ị ga-chọrọ enyemaka nke a-atọ ndị ọzọ omume.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) bụ otu nke kasị mma na mmemme iji mezuo gị mkpa. Nke a kacha ngwá ọrụ ike iṅomi ma wepụ faịlụ site na iTunes ndabere. Nke a na usoro bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows OS na Mac OS. Ugbu a ị nwere ike ịnweta ruo 11 faịlụ na ụdị si iPhone ndabere. Gịnị bụ ọbụna mma, ị nwere ike na-iPhone ndabere faịlụ na kọmputa gị maka ọdịnihu ojiji.
Download Wondershare Dr.Fone maka iOS n'okpuru ugbu a.
Access iPhone backups na 4 nzọụkwụ
Ugbu a, ka ohere iPhone ndabere na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac). Windows ọrụ biko gbalịa Windows version iji hazie ihe ndị yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac). E ị ga-ahụ abụọ mgbake ụdịdị: naputa site na iOS Ngwaọrụ na-agbake site iTunes ndabere File. Iji nweta iPhone ndabere, biko họrọ "naputa site na iTunes ndabere" mode. Ebe a ị na-aga wepụ iPhone ndabere. Biko họrọ nkwado ndabere na mpaghara ị chọrọ iji nweta na pịa "iṅomi" na-anọgide na.
Nzọụkwụ 2. Mgbe iṅomi risịrị, niile ọdịnaya gị iPhone ndabere ga-edepụtara ke edemede dị ka "Igwefoto Roll", "Ozi", "Kpọtụrụ", wdg Ịnwere ike ihuchalu ha dị ka gị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ faịlụ site na iPhone azụ ma na-edebe ha na gị na Mac mere na i nwere ike ịgụ na-eji ha n'ụzọ kwụ ọtọ, ị nwere ike pịa "Naghachi" zọpụta ha na gị na Mac.
1 N'ezie, Wondershare Dr.Fone maka iOS bụ ihe dị ka ihe iPhone data mgbake usoro. Ị nwere ike mfe naghachi faịlụ site na iTunes ndabere. Ihe bụ ihe ọzọ, ị pụrụ ọbụna naghachi faịlụ ozugbo gị iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS.
2 The ikpe mbipute naanị-enye gị ohere ike iṅomi iPhone azụ na-elele scanned faịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ faịlụ na-azọpụta ha na gị na Mac, ị chọrọ iji nweta zuru version.
iPhone ndabere extractor: Wepụ na-agbake iPhone Data
3 ngwọta na-ndabere iPhone ndetu na kọmputa
10 Ọtụtụ-jụrụ Nsogbu banyere iPhone Mmelite na iPhone Jailbreak
Otú nyefee Photos si iPad ka iPhone